Shina Heshida Crystal Diamond Non-pollution Interal rindrina loko mpanao sary mpanamboatra sy mpamatsy | Meihe
Heshida Crystal Diamond Non-Pollosion Interal Wall loko
Heshida Crystal diam-bolan'ny rindrina vita amin'ny vovony maina ny fampiasana pôlitika iraisam-pirenena, tsy misy fandotoana ho an'ny tontolo anatiny sy any ivelany. Ity vokatra ity dia mampiasa teknolojia famoronana Crystal sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ho fanampin'izany, mba hananana fiarovana manohitra Alkali mahery vaika. Ny fisondrotana azo avy amin'ny sarimihetsika sary hosodoko ary ny fanoherana ny fizahana, ny fampihenana mahomby ny fametahana isan'andro amin'ny fahavoazana ho an'ny rindrina, tsy mahasosotra, tsy ilaina indrindra amin'ny haingo sy ny sary hosodoko.
3. Sarimihetsika sary miloko tsara, fampisehoana mikosoka tsara;
4. Ny fanoherana ny rano tsara sy ny fahazoana rivotra;
Previous: Heshida Hamafana ny fanamboarana gorodona tsy vita amin'ny tsipika an-tsokosoko
Manaraka: Heshida Defender Damp manaporofo loko sary anatiny
Famonosana rindrina anatiny